TheAwards: ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်ဆုများ Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | Android ဂိမ်းများ, NOTICIAS, လဲ tutorial
ယခုနိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် TheAwards ဆု၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုကိုကျင်းပလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်သော Android နှင့် iOS အတွက်အကောင်းဆုံး application များနှင့်ဂိမ်းများကိုမှတ်မိရန်ရှာကြံသည့်အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ PickASO နှင့် The App, App Store ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်သောကိရိယာ၏လက်မှမွေးဖွားလာသည့်ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
TheAwards ဆု၏ဤပထမထုတ်ဝေ၌ ကျနော်တို့စုစုပေါင်း 11 အမျိုးအစားရှာပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်မည့်အမျိုးအစား ၁၁ ခုအတွက်ဆုများသည်စုစုပေါင်းယူရို ၁၅၀,၀၀၀ ရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများ၊ ဤဆုများသည်တတ်နိုင်သမျှများပြားသောလျှောက်လွှာများသို့ရောက်ရှိစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရင်မအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်နေသည်။ အရာ 2018 ခုနှစ်တွင်စပိန်အတွက်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း application ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်တက်ရောက်သူအားလုံးဆန္ဒရှိသည့်အများဆုံးဆုဖြစ်သည်။ ဤဆုအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြားကဏ္applicationsများစွာခွဲခြားထားသောသူတို့၏အမျိုးအစားတွင်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာများရှိသည်။ စျေးဝယ်ခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘဏ္Financeာရေးနှင့်စီးပွားရေး၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ပွဲနှင့်ရာသီဥတု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား (ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို၊ တေးဂီတ၊ အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်း၊ AR အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အသုံးအဆောင်များ၊ ကိရိယာများ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း); ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား (ကျန်းမာရေး၊ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ ဆေးပညာ၊ အားကစား); Mobility (ခရီးသွားလာခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သွားလာခြင်း၊ မြေပုံများ၊ အော်တိုနှင့်ယာဉ်များ)၊ ပညာရေးနှင့်မဂ္ဂဇင်းများ (ပညာရေး & မိဘ၊ ကာတွန်း၊ စာအုပ်များ၊ သတင်းများ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်သတင်းစာများ); လူနေမှုပုံစံစတဲ့ (လူနေမှုပုံစံ၊ အလှအပ၊ အစားအစာနှင့်သောက်စရာ၊ အိမ်နှင့်အိမ်); လူမှုကွန်ယက်များ၊ ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ဂိမ်းများ။
ဆုရရှိသူသည်ပါဝင်သည့်အထုပ်တစ်လုံးကိုဆုအဖြစ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် Amazon Web Services ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများမှ ၀ န်ဆောင်မှုများ, အခြားသူများအကြား, PickASO, The Tool ကိုသို့မဟုတ် AppSamurai ။ ဒီကုမ္ပဏီများအတွက်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်ဆုအချို့။ ဆုများ၏စုစုပေါင်းပမာဏသည်ယခုအချိန်ထိယူရို ၁၅၀, ဝဝဝကျော်ရှိပြီး၎င်းသည်တိုးလာနိုင်သည်။
1 TheAwards တွင်မည်သို့ပါ ၀ င်ရမည်နည်း။
3 အော်ဂဲနစ်နှင့် TheAwards
TheAwards တွင်မည်သို့ပါ ၀ င်ရမည်နည်း။
အကယ်၍ သင်သည်ဤပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ရန်စိတ် ၀ င်စားသောကြောင့် TheAwards အခမ်းအနားတွင်ဆုရရှိပါကဤဆုများ၌ပါဝင်နိုင်ရန်လိုအပ်ချက်အချို့ကိုဖြည့်ဆည်းရမည်။ တစ်ဖက်တွင် app သို့မဟုတ်ဂိမ်းသည်စပိန်၌မှတ်ပုံတင်ထားသောရုံးခန်းရှိရမည်။ ဒါ့အပြင် ဆိုပါတယ်လျှောက်လွှာ၏ downloadsApp Store၊ Play Store တွင်ဖြစ်စေ၊ နှစ်ခုလုံးတွင်ဖြစ်စေ၊ 5.000 ကျော်လွန်ရပါမည်.
ဤလိုအပ်ချက်နှစ်ခုကိုသင်ဖြည့်ဆည်းပါက TheAwards တွင်သင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ဖြည့်ရမယ် ဤပုံစံ ဒါကြောင့်သင်ပါဝင်နိုင်တယ် ဤဆုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်မည်သည့်သင်တန်းသားများအတွက်မျှကုန်ကျစရာမရှိပါ။ app ဖိုင်ကိုဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အခါ ဝဘ်သင်၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမြှင့်တင်ရန်အချိန်တန်ပြီ။ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်အထိရှိသည်.
အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီတွင်မဲအများဆုံးရရှိသောလျှောက်လွှာသုံးခုသည်နောက်ဆုံးရွေးချယ်သူများဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လျှောက်လွှာပေါင်း ၃၀ ရှိလိမ့်မည် ဒီဆုအခမ်းအနား၌။
ဂျူရီသည်ကဏ္ each အသီးသီးတွင်အနိုင်ရရှိသူကိုရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအားရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ The Awards ဆုကိုဘာစီလိုနာမြို့၌နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်ည ၆ နာရီမှစတင်ကာ Duvet Club Barcelona (c / Còrsega 2018) တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ကျင်းပသောဖြစ်ရပ်တစ်ခု ORGANIC အက်ပလီကေးရှင်းပါတီအတွင်းမှာ.
အဆိုပါဂျူရီအဖွဲ့ဝင်များထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည် ဖြစ်ရပ်၏ - Vanessa Estorach၊ အမျိုးသမီးများမိုဘိုင်းတွင်တွဲဖက်တည်ထောင်သူ၊ Evgeny Predein, Apiumhub ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်; Elia Méndez၊ စပိန်ရှိ Mobile Marketing Association ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ (MMA Spain); Growth Team အဖွဲ့ဝင် 8fit app တွင်ရှိသည့် Thomas Petit နှင့် Barcelona Tech City ရှိ COO Ricard Castellet ။
TheAwards ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား ORGANIC အက်ပလီကေးရှင်းပါတီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ပြီးသားဒီနှစ်၎င်း၏စတုတ္ထထုတ်ဝေကျင်းပသော။ အနိုင်ရတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေမပေါ်ခင်မှာတက်ရောက်လာသူတွေဟာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတွေမှာစုစုပေါင်းလေးခုပါတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအမျိုးမျိုးကိုတက်နိုင်မှာပါ။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်ndrea Vian, eDreams ODIGEO မှ SEM အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့်မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနမှူးနှင့် Scoot မှ Marketing Manager Anna Juan
ဒီဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆုအခမ်းအနားပြီးနောက်, ပါတီတစ်ခုကျင်းပလိမ့်မည်- အက်ပလီကေးရှင်းများကွန်ရက်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လျှောက်လွှာသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအားလူသိရှင်ကြားကြေညာရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ORGANIC နှင့် TheAwards များကိုစည်းရုံးခြင်းကို Amazon Web Services, Infojobs, Headway နှင့် AppsFlyer စပွန်ဆာများကပြုလုပ်သည်။ အဖြစ်အပျက်မှာများစွာသောပူးပေါင်းအပြင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » TheAwards - ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းများနှင့် application များအတွက်ဆုများ
Google Fit နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုမည်သို့မှတ်တမ်းတင်မည်နည်း